Home News maxaa cusub Magaalada Baydhabo
maxaa cusub Magaalada Baydhabo
Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ay sheegayaan inuu ka socdo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee loogu jiro qabashada doorashada madaxtinimo ee Koofur galbeed oo birito ka dhaceyso magaaladaasi.
Saaka waxaa magaalada laga daremayaa howlgalo dhanka amniga oo aad loo adkeeyay, iyadoona ciidamada amaanka la geeyay wadooyinka gala hoolka la qorsheynayo in birito ay doorashada ka dhacdo.
Waxaana sidoo kale hoolka lagu diyaariyay dhaman kurasta ay xildhibaanada codeynaya iyo sidoo kale halka musharaxiinta ay fariisanayan.
Doorashada ayaa noqoneysaa in ay dhacdo iyadoo uu Mukhtaar Roobow uu ku xiranyahay Muqdisho dowladuna ay sheegtay in uusan buuxin shuruudihii lagu heshiiyay
Previous articleMuxuu ku dhammaaday kulankii Kheyre iyo Gud. Mursal (Xog Rasmi ah)
Next articleCiidamada Maamulka Puntland oo heegan la geliyay maxay tahay sababta?
Ciidamo farabadan oo NISA h oo la geeyay Degaano Ka tirsan...